HR Management Software Myanmar | HR Management System Myanmar- JustLogin
နံပါတ် တစ် HR ဆော့ဖ်ဝဲလ်
သင့်အတွက် HR လိုအပ်ချက်များကို ဆော့ဝဲလ်တစ်ခုထဲပေါ်မှာတင် အလုံးစုံ ရယူနိုင်ပါပြီ
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ Cloud ကိုအခြေပြုထားတဲ့ HR ဆော့ဝဲလ်ဟာ သင်ထမ်းဆောင်နေရတဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကို အဆများစွာ လျှော့ကျသွားစေမှာပါ။
ဘာလို့ JustLogin ကို သုံးသင့်တာလဲ?
ဒါတွေကို ကျွန်တော်တို့ကပဲ လုပ်နိုင်တာမို့ပါ။ ဘာလို့ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က စင်္ကာပူမှာ အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ ဝန်ထမ်းများကို အကျိုးရှိရှိ ဖြစ်စေရန်အတွက် HR နဲ့ ပက်သက်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးနေတာ နှစ် ၂၀ ကျော် ကြာခဲ့ပါပြီ။ ဒီအတွေ့ အကြုံတွေက သင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေ သင့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေကို နားလည်နိုင်ဖို့ အထောက်အကူအများကြီး ရစေပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့က ဘယ်လိုမျိုး ကွဲပြားခြားနားတာလဲ?
JustLogin ဟာ cloud-based HR system solutions ဆော့ဝဲလ် ဖြစ်တာကြောင့် အချိန်ကုန် ငွေကုန် သက်သာစေမှာပါ။ Module တစ်ခုချင်းအလိုက် စီမံခန့်ခွဲတဲ့ ပုံစံနဲ့ လုပ်ဆောင်ထား သလို ပုံမှန် အဆင့်မြှင့်တင်မှုတွေ လုပ်ပေးနေတာ ဖြစ်လို့ JustLogin ဟာ လုပ်ငန်းတာဝန်တွေ အပေါ် ထိရောက်မှုရှိသလို လိုက်ရော ညီထွေစွာနဲ့ သုံးစွဲနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Module တစ်ခုချင်းအလိုက် ဝန်ထမ်း တစ်ဦးချင်းအလိုက် ပေးရတာဖြစ်လို့ သင့်မှာရှိတဲ့ ဝန်ထမ်းရှိသလောက် အတွက်ကိုသာ ပေးဆောင်ဖို့ လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
HR ဆော့ဖ်ဝဲလ် ဆိုင်ရာ ရရှိထားသော ဆုတံဆိပ်များ
ကျွန်တော်တို့ဟာ ၂၀၁၈ မှာ စင်္ကာပူနိုင်ငံရဲ့ နံပါတ် တစ် HR ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဆုကို ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဂုဏ်အယူရဆုံးကတော့ သင့်ရဲ့ လုပ်ငန်းအတွက် HR စနစ်ကောင်းမွန်လာဖို့ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ပေးခွင့် ရတာပါပဲ။
ကျွန်ုပ်တို့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်သုံးစွဲသူများ နှင့် သူတို့၏ အကြောင်းအရာများ
သုံးစွဲသူပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော် ရှိနေပြီး မျှဝေစရာ အကြောင်းအရာတွေလည်း ကျွန်တော်တို့မှာ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အကြောင်းကို သုံးစွဲသူတွေက ဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတာ APAC မှာ ဖတ်ကြည့်နိူင်ပါတယ်။
JustLogin က ကျမတို့လို ကုမ္ပဏီအသေးလေးတွေအတွက်လည်း အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။ JustLogin မှာဆိုရင် Fingerprint စက်လိုမျိုး Kiosk device နဲ့ Clock In Clock Out လုပ်လို့ရသလို ကိုယ်ပိုင်ဖုန်းကနေတဆင့်လဲ လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဘယ်နေရာ ရောက်ရောက် ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ရုံးတက် ရုံးဆင်း အချက်အလက်တွေကို ကိုယ်ကွန်ပျူတာကနေတဆင့်လည်း စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
JustLogin မှာက ကိုယ်ဘယ်လောက် work hours လုပ်ထားပြီလဲ ကိုယ်ဘယ်လောက် OT ရနိုင်လဲ ဆိုတာကို ကြည့်လို့ရတဲ့အတွက် ဝန်ထမ်းတွေအတွက်လည်း အများကြီး အဆင်ပြေသွားပါတယ်။
အရင်က Manual လုပ်တာထက်စာရင် ခု Digital ပိုင်းနဲ့ System ကျကျလေးသွားတော့ ပိုပြီတော့အဆင်ပြေတယ်။ JustLogin မှာက Attendance နဲ့ Payroll နဲ့ က Function တွေက ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အတွက် Payroll တွက်တဲ့အခါပိုပြီးအဆင်ပြေတယ်။ အဲဒါက အရင်ကထက်စာရင် Payroll run ဖို့အတွက် သူတို့ရဲ့ total working hours တွက်တဲ့အခါကျတော့ ပိုပြီးတော့ အရင်ကထက်စာရင် တဝက်လောက် ပိုပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတယ်။
ဒီနေ့ ကစပြီး အခမဲ့ အစမ်း သုံးကြည့်လိုက်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ HR ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဟာ သင်ထမ်းဆောင်နေရတဲ့ HR တာဝန်များကို လျော့ချပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို အစမ်းသုံးဖို့လည်း Credit Card မလိုပါဘူးခင်ဗျာ
အခမဲ့ ၁၄ ရက် အစမ်းအသုံးပြုရန်